မပြေးခင်မှာ အကြောလျှော့ပါ - Hello Sayarwon
အပြေးလေ့ကျင့်တာက ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အလေ့အထတစ်ရပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် နည်းစနစ်မှန်မှန်လုပ်တတ်ဖို့တော့လိုပါမယ်။ ဒီတော့ နည်းစနစ်မှန်မှန်ပြေးဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ။ အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ မပြေးခင်မှာ အကြောလျှော့ပါ။ မပြေးခင်မှရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်က ကြွက်သားတွေကို အသုံးပြုပြီး လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာ အကြောတွေကိုပြေလျော့အောင် လျှော့ပေးရမှာပါ။
မပြေးခင် အကြောလျှော့ပါလို့ ပြောရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
မပြေးခင်မှာ အကြောလျှော့မယ်ဆိုရင် ကြွက်သားတွေအတွက် ကောင်းကျိုးများစေမှာ အသေအချာပါ။ မပြေးခင်မှာ အကြောလျှော့တာက ကြွက်သားတွေကို ပူနွေးစေပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းစေနိုင်တာကြောင့် ကြွက်သားတွေဒဏ်ဖြစ်တာမျိုး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကြွက်သားတွေတောင့်တင်းနေတာမျိုး မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကြွက်သားတွေ စုတ်ပြဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့ဆိုရင်လည်း မပြေးခင်မှာ အကြောလျှော့ပေးတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမှာပါ။ ဒါကြောင့် မပြေးခင်မှာ ၅ မိနစ် ဒါမှမဟုတ် ၁၀ မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီး အကြောအရင်လျှော့ပါ။ ဒါမှ ကြွက်သားတွေဆီ သွေးနဲ့အောက်ဆီဂျင်ရရှိမှုကောင်းစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးများမှာပါ။ ကြွက်သားတွေကိုပြေလျော့စေပြီး လှုပ်ရှားမှုကောင်းစေတာကလည်း ခပ်သွက်သွက်လေးပြေးနိုင်အောင် အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့ပေးနိုင်မှာပါ။ အဆစ်တွေထိခိုက်နိုင်ခြေကို နည်းစေသလို အဆုတ်ထဲကို လေဝင်ရောက်ရှိမှုလည်းကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုသတိထားရမှာက အကြောလျှော့တဲ့အခါ နာကျင်တာမျိုးမဖြစ်စေဖို့ပါ။ အကြောလျှော့တာက သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်တာမှန်ပေမယ့် ခြေဖျားကို အတင်းလက်နဲ့ထိအောင်လုပ်တာမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့။ မီသလောက်ကနေစပါ။ တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ အဆင်ပြေလာမှာပါ။ အကြောလျှော့တဲ့အချိန်မှာ လေကို ရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
အောက်ပိုင်းထိုင်တဲ့ (lunges) လေ့ကျင့်ခန်း
ဒူးမြှောက်လေ့ကျင့်ခန်း (High knee)
jumping jacks လို့ခေါ်တဲ့ လက်တွေခြေတွေဆန့်တန်းပြီး ခုန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။
အပြေးလေ့ကျင့်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အခုလို ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးကျန်းမာစေတယ် – သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင် တိုးစေနိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာ သွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှုကောင်းစေနိုင်တာကြောင့် နှလုံးကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။
သွေးတိုးကျစေနိုင်တယ် – ပြေးတာက သွေးတွင်းကိုလက်စထရောတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်သလို ကယ်လ်လိုရီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်တာကြောင့် သွေးတိုးကိုလည်း ကျစေနိုင်ပါတယ်။
သွေးချိုထိန်းညှိပေးတယ် – သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို လျော့ကျစေနိုင်ပြီး အင်ဆူလင်တုံ့ပြန်မှုကို ကောင်းစေနိုင်တာကြောင့် သွေးချိုထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။
ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းစေတယ် – ဦးနှောက်ဆီ သွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှုကောင်းစေသလို သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင်ပမဏကို တိုးစေနိုင်တာကြောင့် အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကောင်းစေနိုင်သလို ဦးနှောက်ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုပြေလျော့စေတယ် – အပြေးလေ့ကျင့်တာက ကိုယ်တွင်းမှာ ပျော်ရွှင်စေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို ထွက်ရှိစေပြီး စိတ်ကိုပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေနိုင်သလို စိတ်ဖိစီးမှုကို ပြေလျော့စေနိုင်ပါတယ်။
အသက်ရှည်စေတယ် – အပြေးလေ့ကျင့်တာက လူ့သက်တမ်းကို ၃ နှစ်လောက်အထိ ရှည်စေနိုင်တယ်လို့ လေ့ာမှုတွေအရသိရပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ အသက်ရှည်စေဖို့ဆိုရင် အပြေးလေ့ကျင့်ပေးသင့်ပါတယ်။
အိပ်ပျော်စေတယ် – အပြေးလေ့ကျင့်တာက ညဘက်တွေမှာ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်စေဖို့ အကောင်းဆုံး အထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။
ကဲ ….ဒီလောက်အကျိုးများတဲ့ အပြေးလေ့ကျင့်ခန်းကို ထိထိရောက်ရောက်လေးဖြစ်ပြီး အကျိုးကျေးဇူးများစေဖို့ မပြေးခင်နဲ့ ပြေးပြီးချိန်မှာ မှန်မှန်ကန်ကန်လေး အကြောလျှော့လို့ နေ့တိုင်း လုပ်ကြရအောင်လား Hello ဆရာဝန် ပရိသတ်ကြီးရေ………
Stretch Before or After Run? Which One is Better? https://rockay.com/blog/should-you-stretch-before-running-or-after/ Accessed Date 25 October 2019
The Importance of Stretching Before Running https://www.sportsrec.com/488230-the-importance-of-stretching-before-running.html Accessed Date 25 October 2019
Stretching: Focus on flexibility https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/stretching/art-20047931 Accessed Date 25 October 2019
အစားအသောက် နှင့် အပြေးလေ့ကျင့်ခန်း
kinesiology တိပ်တွေဟာ အပြေးသမားတွေအတွက်ရော အသုံးဝင်သလား